Rasaas dhimasho & dhaawac sababtay oo lagu furay gaari rakaab ah | Heeersare.com
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Booliska Hirshabelle ay rasaas ku fureen gaari BL-ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah, kaasoo marayay duleedka degaanka Qalimow oo ka tirsan gobolkaasi.
Rasaasta ay fureen ciidankan ayaa ka dambeysay ka dib markii ay ka shakiyeen gaarigan oo ku soo dhawaaday barta kontorol ee ay ku sugnaayeen, halkaasina waxaa ku geeriyooday laba ruux, halka ay ku dhaawacmeen Saddex qof oo kale.
Goob-joogayaal ayaa sheegaya in gaariga la rasaaseeyay uu ka soo ambabaxay magaalada Jowhar, kuna soo jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Ciidamada rasaasta ku furay gaariga ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamo ka tirsan Booliska Hirshabeelle oo shalay fariisimo ka sameystey degaanka Qalimow, si ay uga hortagaan weerarada Shabaab.
Masuuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dhacdadan, labada qof ee geeriyootay mid ka mid ah waxa ay aheyd Haweeney, iyo qofka labaad oo rag ahaa la waayey cid aqoonsata.